Safiirka Mareykanka oo qaabilay labo ka mid ah musharaxiinta Galmudug – Hornafrik Media Network
Safiirka Mareykanka oo qaabilay labo ka mid ah musharaxiinta Galmudug
By Liibaan Nuur	 On Dec 2, 2019
Labo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Danjire Donald Yamamoto.
Musharaxiinta kala ah Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Kamaal Guutaale oo isna ka mid ah hoggaanka Xisbiga Wadajir ayaa Yamamoto kala hadlay sidii ay doorasho madaxbanaan oo loona dhan yahay ay uga dhici laheyd Galmudug.
Qoraal kooban oo lagu soo dabacay barta Twitter-ka safaaradda Mareykanka ee Muqdisho oo looga hadlay kulankaas ayaa lagu yiri, “Hey’ado dowladeed oo xoog leh waxay ka dhigan yihiin awood loola tacaali karo xasaradaha bani’aadannimo, ka guuleytayaasha argagixisada iyo soo abuuridda xasiloonida Soomaaliya, si loo gaaro baraare”.
Odawaa iyo Kamaal ayaan dhankooda weli wax war ah kasoo saarin kulanka maanta ee ka dhacay xarunta safaaradda Mareykanka ee Muqdisho oo ay la qaateen safiirka Mareykanka Donald Yamamoto.
Shalay ayey aheyd markii uu safiirka Mareykanka safaaradda ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo haatan ah guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ku midoobeen dhow xisbi siyaasadeed oo dalka ka jira.
Taliska Booliska oo war ka soo saaray roobab la filayo inay dalka ka da’aan
Wasiirka Batroolka: “Soomaaliya waxay noqon kartaa sida Texas oo kale”